Khubaro Arrimaha Baasaboorada oo ka socda Midowga Yurub oo gaaray Muqdisho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Khubaro Arrimaha Baasaboorada oo ka socda Midowga Yurub oo gaaray Muqdisho[Sawirro]
MUQDISHO – Waxaa maanta gaaray magaalada Muqdisho khubaro arrimaha hubinta dukumentiyada u qaabilsan dalka Norwey si ay u arkaan habka qaasashada Baasaboorka Soomaaliga.
Imaanshaha wafdiga khubarada ah ayaa ka dambeysay ka dib safaro uu agaasimaha guud ee HSJ ku tagay dalalka reer yurub oo uu kala hadlay in ay aqoonsadaan kuna kalsoonaadaan Basaboorka Soomaaliya. Ujeedada ayaa ah in shakiga iyo kalsooni darada laga saaro dalalka hore u joojiyey in dalalkooda lagu soo galo baasaboorka Soomaaliga ah.
Wafdiga Khubarada ah oo ay wehlinayeen masuulyiin ka tirsan Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa waxaa la geeyay xarunta baarista dambiyada ee booliiska ( C I D ) si ay u arkaan habka loo baaro qofka Soomaliga ee raba in uu qaato Basaboorka Soomaaliga, waxayna xarunta C I D kula kulmeen taliyaha laanta Danbi baarista booliiska Jenaral Saciid Cali Kadiye.
Ugu dambeyn khubarada ayaa soo gaaray xarunta dhexe ee bixinta Baasaboorka Muqdisho waxayna mid mid u tageen xafiisyada Hay’adda si ay u arkaan habka bixinta Baasaboorka.